Bisadda Savannah, tan ugu weyn | Bisadaha Noti
Haddii aad u maleynaysid in Maine Coons ay ahaayeen bisad weyn ... Savannah wuxuu u ekaan doonaa shabeel celcelis ahaan (oo aan ahayn mini 🙂) oo miisaankeedu yahay 23kg. Xayawaankan quruxda badan ayaa u weyn sida uu kalgacalka u yahay, iyo sida kalgacalka leh ee u ciyaara.
Waa bisad isku dhafan oo dad aad iyo aad u badani u jecel yihiin. Waana taas, muuqaalkaas macaan wuxuu qalbi kastaa dhalaaliyaa. Laakiin waa maxay asalka Savannah? Iyo tan ugu muhiimsan, Waa maxay taxaddarka ay qaadataa si loo faraxsanaado?
1 Sheeko bisad Savannah
4 Daryeelka gaarka ah ee Savannah
4.2 Jimicsi iyo ciyaaro
5 Waa imisa qiimaha bisadda Savannah?
6 Sawirro iyo muuqaal
Sheeko bisad Savannah
Bani'aadamku had iyo jeer wuxuu rabay inuu helo muunado ka sii qurxoon, tijaabooyin adkaysi badan isla markaana isla markaasna ku fududaado in la dhaqdo Sannadkii 1986-kii bisad guri ayaa waxaa la tallaabay adeege Afrikaan ah. Adeeggu waa xayawaan ku nool Afrika, culeyskiisuna yahay ugu badnaan 18kg caadi ahaanna wuxuu leeyahay ugu badnaan 4 dhalinyaro ah 65 maalmood oo uur ah ka dib.
Mukulaasha ka dhalatay iskutallaabtaas hore waxay dhaxashay astaamihii ugu muhiimsanaa ee aabbeheed, taas oo ah, cabirka, qaabka mottled ee dhogorteeda, iyo dabcan sidoo kale qayb ka mid ah dareenka dabiiciga ah ee duurjoogta In kasta oo, haysashada bisad guri ahaan hooyo ahaan, waxaan u maleyneynaa in gabadheeda yar ay tahay inay jeclaatay ka mid ahaanshaha dadka.
Tiro ka mid ah mukulaalleyda bisaduhu waxay xiiseynayeen bisaddan aad u gaarka ah, waxayna sii wadeen inay kobciyaan taranka. Sidaa darteed, waxay ka gudbeen waddooyin ay la socdaan Bisadda Siamese, bisad gaaban, gaashaan qorraxeed, Masar mau y ocicat.
Sannadkii 2012 waxaa si rasmi ah loogu aqbalay inay taran ahaan tahay TICA (Ururka Caalamiga ah ee Bisadaha), oo aqbalaya 5 jiil oo Savanaah ah (F1, F2, F3, F4 iyo F5, taas oo ah sida loo kala saaro jiilalka guryaha. Waxa xiisaha leh, jiilasha cusubi way ka cabir yar yihiin kuwii hore, waana ka doqon badan yihiin) .
Savannah waa bisad weyn, miisaankeedu yahay 9 ilaa 23kg (waxay kuxirantahay jiilkaaga). Jidhkiisu waa weyn yahay, dherer yahay, xoog badan yahay oo dhuuban yahay, waxaana ku ilaaliya timo jilicsan oo jilicsan oo bunni ah oo leh dhibco madow ama madow, buluug leh dhibco madow, cawl leh dhibco madow ama madow, iyo oranji leh dhibco madow iyo madow.
Madaxa waa mid dhex dhexaad ah, indhihiisuna wax yar bay wareegayaan, cagaar, bunni ama jaalle. Lugaha waa dhaadheer yihiin oo dhaqdhaqaaq badan yihiin. Dabogeedu waa dheer yahay, ganaaxan yahay oo siddooyin mugdi ah oo mugdi ku jiro leh
Dabeecadda nooca Savannah way yara duwanaan kartaa iyadoo kuxiran jiilka ay ka tirsan tahay. Hadday tahay F1 ama F2, waxay noqon doontaa mid aad u firfircoon, mana muujinayso xiisaha badan koolkoolinta; halkii, haddii ay tahay F3, F4 ama F5, waxaad u baahan doontaa inaad dadka aad u sii joogto oo aad ugu raaxaysato shirkadooda.
Maskaxda ku hay in hiddo-wadayaasha adeegga Afrika ay wali aad ugu noolyihiin DNA-da Savannah. Tani waxay ka dhigan tahay inuu jecel yahay inuu boodo, banaanka joogo, iyo ciyaaro. Sidaa darteed, waa doofaarro u baahan taxaddar taxaddar gaar ah si ay uga farxiso.
Daryeelka gaarka ah ee Savannah
Waa inaad cuntaa cunto tayo sare leh, oo aan lahayn badar ama wax soo saar. Ujeeddadu waa in la siiyo Yum, Summum ama Cunto la mid ah maadaama ay tahay bisad, sidaa darteed waxaan hubin doonnaa in koritaankeeda iyo horumarkiisu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan.
Jimicsi iyo ciyaaro
Maalin kasta waxaa lagama maarmaan ah in lala aado socod, sidii ay ey ahayd. Savannah waa inuu awood u yeelan karaa inuu ku baxo banaanka, isaga oo wata xarkaha iyo xarkaha, iyo had iyo jeer meelaha xasilloon.
Sidoo kale, guriga waa inaad waqti galisaa. Laba ama seddex ilaa iyo 10-15 daqiiqo kulanno dhaadheer oo maalinle ah ayaa isaga ka dhigi doona midka ugu farxadda badan adduunka.
Timahaaga dhogorta ah ayaa is-hagaajin doona dhowr jeer maalintii, sidaas darteed timahoodu ha ahaadaan kuwo nadiif ah. Laakiin gaar ahaan inta lagu jiro xilliga moodada (guga) aad ayey muhiim u noqon doontaa in la cadayo ugu yaraan hal mar maalintii, in kasta oo lagula taliyo inay laba jiraan
Tani waa bisad in caafimaadkiisu wanaagsan yahay. Si kastaba ha noqotee, isagu, sida qof kasta oo kale, wuu jiran karaa. Sidaa darteed, haddii aan aragno inuu cuntada ka lumay, miisaanka lumay, ama aan u aragno inuu bilaa liitaa, waa inaan u geynaa dhakhtarka xoolaha si aan u baarno.
Waa imisa qiimaha bisadda Savannah?
Toddobaad toddobaad ah eeydii Savannah.
Bisadda Savannah aad ayey uga qaalisan tahay bisadaha kale, kaliya maahan inay isku dhexjir tahay, laakiin sidoo kale maxaa yeelay si fiican looma yaqaanno sidaa darteedna ma fududa in la helo. Sidaa darteed, qiimaha ayaa u dhexeeya 1400 iyo 6700 euro, waxay kuxirantahay halka ay ka timaado iyo xayawaanka laftiisa.
Sawirro iyo muuqaal
Savannah waa xayawaan aad u qurux badan. Wuxuu leeyahay muuqaal adiga ku soo jiita, jacaylna kaa dhigaya, iyo dabeecad shaki la’aan kaa yaabin doonta. Caddaynta tani waa sawirradan iyo fiidiyaha aan hoos ku soo lifaaqnay. Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysan doontid sida aan ku raaxeyno:
Sawir - Exoticosavannahs.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisada Savannah, tan ugu weyn
Sida muuqata waa xayawaan isku dhafan oo leh nooc duurjoog ah, sidaa darteed semi-wild. Waxay ubaahantahay meelo balaaran waana wax aad uga dhaqso badan, kana awood iyo baaxad weyn bisada guriga, waxay leedahay lugaha dhaadheer, waxay umuuqataa inay tahay orodyahan weyn. Mid ka mid ah fiidiyowyada ayaa ficil aan taxaddar lahayn lagu arkay, haweeneyda ayaa "gacanta gacanta" kula ciyaaraysa gabadha oo wejigeeda ku dhacaysa ... Shakhsiyan, waxay i siinaysaa isku dar murugo iyo cabsi, waxaan aaminsanahay in bisadaha duurjoogta ay tahay inay leeyihiin meel adduunka laga ixtiraamo, laakiin ku darista kuwa gudaha u maleynayo inaysan jawaab u aheyn ... Uma maleynayo inay caqli gal tahay inaad la noolaato "nooc cusub" Salaan
Anigu ma ihi taageere weyn bisadaha isku dhafka ah sidoo kale. Waxaan aaminsanahay in xayawaanka duurjoogta ah ay tahay inay ku noolaadaan xoriyad, deegaanadooda dabiiciga ah. Laakiin waxaan qirayaa inaan jeclahay Savannah. Dabcan, waxay ubaahantahay boos iyo wixii kahoreeya wax barasho oo dhan, maxaa yeelay xoqitaankeeda ayaa hubaal ah inay dhaawici doonaan ugu yaraan labalaab inta ka xoqan bisadda guriga.
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Waxaan la xiriirayaa ganacsade bisad savannah f1 gaar ah. Wuxuu dhahaa waxay joogaan Ukraine, Kiev laakiin ma garanayo hadii la i aaminaayo iyo in kale. Waxaan codsaday in lahormariyo 50% qiimaha iyo dheelitirka kadib markaan helay dukumiintiyada oo dhan. Maxaad igula talinaysaa
Maya, anigu ma aaminin. Halkee ka timid?
Boqortooyada Midowday (UK) waxaa ka jira kuwan: https://www.pets4homes.co.uk/sale/cats/savannah/
Waa maxay dhalashada bisadda savannah?